Ny filoha vaovaon'i Zambia, Hichilema, dia tia fizahantany: Vonona handray anjara ny Birao fizahantany afrikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny filoha vaovaon'i Zambia, Hichilema, dia tia fizahantany: Vonona handray anjara ny Birao fizahantany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Zambia
Filoham-pirenena Zambia Hichilema
Rehefa miresaka momba an'i Zambia izao tontolo izao sy Afrika dia miresaka momba ny fizahan-tany sy ny varahina.
Androany Hakainde Hichilema dia voamarina ho filohan'i Zambia - ary amin'ity fizahan-tany ity dia mandresy i Zambia.
Nahita izany ny Birao Afrikana momba ny fizahantany ary nanaiky haingana.
3 andro lasa izay eTurboNews naminavina Hakainde Hichilema ho lasa filoham-pirenen'i Zambia vaovao. Voamarina amin'ny fomba ofisialy izao.
Ny komisiona misahana ny fifidianana dia nanome cot Hichilema 2,810,777 hanoherana an'i Lungu mpanohitra azy izay nahazo 1,814,201- tamin'ny isa rehetra afa-tsy iray amin'ireo 156 isam-bato voisaina. Noho izany ny filohan'ny komisiona Esau Chuly dia nanapa-kevitra an'i Hichilema ho filohan'ny Repoblikan'i Zambia vaovao
Iray amin'ireo tompon'andraikitra iraisampirenena voalohany niarahaba ny filoha Hichilema dia ny filohan'ny filan-kevitry ny fizahantany afrikanina Cuthbert Ncube. Fantany ny dikan'ny fizahan-tany amin'ny filoha Hichilema izay vao voafidy
Ilay filoham-pirenena vao voafidy ao Zambia dia lehilahy mpizahatany ihany koa. Herintaona lasa izay dia niresaka tao amin'ny Facebook-ny momba ny fizahan-tany be zotom-pon'i Zambia izy ao anatin'izany i Victoria Falls, Lumangwe, ary riandrano mahafinaritra hafa any amin'ny Northern Circut, tsy manadino an'i Ntumbachushi, Kamabo ary Kudalila.
Notohizany ny resaka fifindra-monina mammal lehibe indrindra eto an-tany izay hita ao Zambia. Sary hosodoko vatosoa sy sary an-johy taloha any amin'ny ankamaroan'ny faritaninay miaraka amin'i Nachikufu malaza any Manyinga.
Ny ala Chirundu Fossil nanomboka tamin'ny 150 tapitrisa taona lasa izay, no loharanon'ny Zambezi ao Mwinlunga, karazam-borona 750, ary karazam-biby hafa tsy tambo isaina.
Nilaza ny filoha vaovao fa tsy misy farany ny lisitry ny fizahantany. Nohazavainy fa manintona mpizahatany 900,000 isan-taona i Zambia ho an'i Victoria Falls irery.
Nilaza izy fa tsy nametraka ny fizahan-tany any an-tampon'ny bracket isika, saingy mila manao izany isika izao. Raha nilaza an'io izy dia talohan'ny COVID. Ny tetik'adiny dia ny hampiakatra ny mpizahatany ho 2.5 tapitrisa miaraka amin'ny vola miditra ambany indrindra 1.9 miliara dolara. Raha vantany vao mahazo COVID-19 ity tontolo ity aorian'ity filoha vaovao ity dia mety hanohy ity drafitra ity amin'ny maha-mpitarika an'i Zambia azy.
Maheno izany dia tsy mahagaga raha ny iray amin'ireo niarahaba ny filoha voafidy voalohany dia i Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina (ATB)
Ny birao fizahantany afrikanina dia miarahaba ny filoha hajaina Hakainde S Hichilema noho izy voafidy ho filoham-pirenena faha-7 amin'ny Repoblikan'i Zambia.
Ankamaminay sy omentsika voninahitra ny fifandraisanay akaiky amin'ity firavaka atsy Afrika ity ao anatin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Zambia no mpamokatra varahina lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary iray amin'ireo zava-mahatalanjona eran'izao tontolo izao ny mpizaha tany any Zambia, The Mosi-wa-Tunya.
Cuthbert Ncube, filohan'ny ATB
The Birao fizahantany afrikanina (ATB) dia hanohana sy hampiorina ny fifandraisana amin'ity firenena goavambe ity rehefa mamerina mamorona sy mamerina ny laoniny ny kaontinanta afrikanina isika ho toy ny toerana irina safidy ho an'i Afrika sy izao tontolo izao.
Ny fianjeran'i Victoria no bodofotsy betsaka indrindra eto an-tany misy ny rano milatsaka ary manan-danja amin'izao tontolo izao noho ny fiasa ara-jeolojika sy ara-jeôpôlôjika miavaka miaraka amin'ny fomba fijery mahatalanjona sy ny fananganana tany mavitrika miaraka amin'ny hatsaran-tarehy miavaka ateraky ny Falls, ny famaohana ny zavona ary avana.
Miarahaba ny Filohako. Manantena aho fa rehefa mianiana ianao, dia hitarika ny fisarahan-kery. Mihoatra noho ny zavatra rehetra, Zambia mila fitohizan'ny politika mihoatra ny fitondrana ary ny fitsarana tsy miankina irery ihany no afaka miantoka izany. Iray amin'ireo hafatra maro nalefa tamin'ny media sosialy toy ny Twitter izany. Ity hafatra ity dia navoakan'i Zikomo Kwambili.
Hafatra iray hafa navoaka nilaza hoe:
Miarahaba ny filoha Hichilema sy ny vahoaka Zambiana izay nifidy mihoatra ny fari-poko aseho Zambia dia mbola firenena tokana
Izany no nahatonga ny fanintelony fa ny fahefana dia niova am-pilaminana avy amin'ny antokon'ny fitondrana ka hatramin'ny mpanohitra hatramin'ny nahaleoan'ny firenena afrikanina atsimo an'i Britain tamin'ny 1964.
Manerana an'i Zambia, nipoaka ny fankalazana rehefa nandihy sy nihira ireo mpanohana an'i Hichilema izay nanao ny mena sy mavo an'ny antoko United United for National Development (UPND), raha naneno ny anjomara ny mpamily.
Hichilema, 59 taona, CEO teo aloha tao amin'ny orinasan-kaonty iray talohan'ny nidirany tao amin'ny politika, dia miatrika ny asa ankehitriny hamelomana ny haren'i Zambia. Ny toekarena dia navoakan'ny vidin'ny varahina be mpitia kokoa - ankehitriny, eo an-tampon'ny folo taona eo ho eo, atosiky ny fiakaran'ny fiara elektrika.
Tamin'ny taon-dasa, i Zambia, mpitrandraka varahina faharoa lehibe indrindra eto Afrika, dia namokatra vokatra.
Lungu, 64 taona, mbola tsy nanaiky. Nasehony fa mety hihaika ny valiny izy, izay ho sarotra, raha jerena ny sisiny.